Col. Rufle: Sh/ Umal Shalay Wuxuu Nagu Xakumay Riddo Haddana Kismaayo oo Itoobiyaan Heysto Ayuu Guryo Sharci Darro Ah Ka Dhisanayaa” (Dhageyso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Feb 20, 2018 246 0
Mar wax laga weydiiyay booqashadii ay wadaadaha Ictisaam ku tageen magaalada Kismaayo ayuu sheegay inuu aad uga xun yahay in rag wadaadnimo sheeganaya ay booqdaan magaalo aan xor ahayn oo ku jirta gacanta ciidamada Itoobiya iyo kuwa Kenya.
Sheekh Umal ayaa dhawaan dhagax dhigay dhul uu muran ka taagan yahay oo ku yaalla magaalada Kismaayo, dhulkaasoo sida uu sheegay uu ka iibsaday dadkii gacanta ku hayay waagii dowladda iyo burburkeedii kadib. Su’aashu waxay noqoneysaa, dhul ma waxaa laga iibsadaa dadkii lahaa mise kuwii gacanta ku hayay?
Midda kale culimada Ictisaam ayaa waxay u muuqdaan kuwa ku hor kufay caamada kadib markii ay dhaqan ka dhigteen wixii ay shalay markey toosnaayeen dadka ku dili jireen kuna gaaleysiin jireen oo ah in aan shisheeyaha lala shaqeyn islamarkaana aanan loo soo raacin dadka muslimiinta ah ee la dagaalamaya.
Halkan Ka Degso Wareysiga Col Aadan Rufle